सामाजिक नेटवर्क को व्यापार | Martech Zone
सोमवार, मे 11, 2009 शनिबार, जनवरी 21, 2017 Douglas Karr
डेभिड सिल्भर, एक उद्यम पूंजीपति जो सामाजिक नेटवर्कमा विशेषज्ञता राख्छन् सामाजिक नेटवर्क व्यवसाय योजना: १ Strate रणनीतिहरू जसले ठूलो धन सम्पत्ति सिर्जना गर्दछ। मँ किताबको साथ रूचिको साथ पढ्दै छु - किनकि म एक सह-संस्थापक हुँ सानो इण्डियाना र एक को मालिक Navy Veterans को लागी सामाजिक नेटवर्क.
दुई नेटवर्कको धेरै फरक व्यापार मोडेलहरू र लक्ष्यहरू छन्। प्याट कोयलले सानो इण्डियानाको स्वामित्व राख्दछ र अपरेट गर्दछ र निर्माण गर्नका लागि आन्तरिक प्रतिभाको लाभ उठाउन खोजिरहेको छ अन्तिम नेटवर्क - प्रतिभा लाई सँगै ल्याउँदै, लाई रोकियो दिमाग नाली, स्थानीय कला र मनोरन्जन समर्थन, र रचनात्मकता र विचारहरूको लागि एक केन्द्र प्रदान। त्यहाँ सानो इण्डियाना निर्माण जारी राख्नको लागि एक विशाल क्षमता र अवसर छ - त्यसैले म अझै राम्रो ठाउँमा योजना बनाएको देख्दिन (यद्यपि म प्याटसँग पुस्तक साझेदारी गर्दैछु)।
नेभी भेट्स एक नाफा नकमाउने सीमित देयता कर्पोरेशन बन्नको लागि अग्रसर छन्। नेभी भेट्सको लक्ष्य सबैभन्दा ठूलो र सबै भन्दा राम्रो सामाजिक नेटवर्कको लागि हुनु हो संयुक्त राज्य नौसेना वेटरन्स। नेटवर्कको कुनै पनि मोनेटाइजेशन यसको सदस्यहरूले भोट गरेपछि दिग्गजहरूको दानमा दान गरिनेछ। म चाँडै पहिलो चेक लेख्न को लागी छु! कुनै श doubt्का छैन कि नेटवर्कले जीवन परिवर्तन गर्दछ ... र अन्य सैन्य नेटवर्कबाट आफूलाई अलग ती ती दिग्गजहरु जो पहिले नै धेरै दिएका छन् को फिर्ता बन्द गर्न खोज्दै देखि अलग।
सामाजिक नेटवर्क व्यवसाय योजना सामाजिक नेटवर्क पैसा बनाउन कसरी मा एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण बनाउँछ। संक्षेप मा, नेटवर्क भित्र संख्या को शक्ति को रूप मा उपयोग गर्नु पर्छ सान्दर्भिक नेटवर्क कम्पनीहरु लाई व्यापार ड्राइभ गर्न। कल्पना गर्नुहोस् एक बैंक, एक स्टोर, एक वकील फर्म, आदि। मा खरीद मा सानो इण्डियानाको आधिकारिक [यहाँ सम्मिलित उद्योग]। त्यहीं डेभिड सिल्भरले सम्भावना देख्दछन्।
म यहाँ सूची बनाउन १ to रणनीतिहरू वास्तवमा राख्न सक्दिन ... मलाई लाग्छ त्यहाँ अझ धेरै वास्तविक छ। डेभिडले तपाईंको सामाजिक नेटवर्क खोज्न र खरीद गर्न, बढ्दै, मोनेटाइज गर्न र बेच्नको बारेमा पूर्ण पुस्तक समावेश गर्दछ। यो देख्न बाँकी छ कि यदि रेफरलहरू $ to०० देखि $ १,००० प्रति सदस्यको लागि मानिन्छ जुन डेभिडले समर्थन गर्दछ ... एक माथि मिलियन निing नेटवर्कहरू र सयौं लाखौं प्रयोगकर्ताहरू ... त्यो धेरै पैसा बाँकी रहेको छ।
यदि तपाईं कडा परिश्रम गर्ने उद्यमी हुनुहुन्छ जसले तपाईंको सामाजिक नेटवर्क विकास गर्न दिन र रात काममा आफूलाई समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ - यो केवल तपाईंले खोजिरहनुभएको पुस्तक मात्र हुन सक्छ! मलाई पुस्तकमा प्रत्येक रणनीतिसँगै जानको लागि वास्तविक-विश्व उदाहरणहरू हेर्न मनपर्‍यो। धेरै जसो भागको लागी, यो पुस्तक व्यवसाय योजना भन्दा पूर्वानुमानको एक बिट हो जस्तो देखिन्छ।
डेभिडको पूर्वानुमानका लागि, यद्यपि ... म सहमत छु! सामाजिक नेटवर्कको शक्ति सुविधाहरू, प्लेटफर्म, नम्बरहरूमा छैन ... यो नेटवर्कको प्रासंगिकतामा छ कि ट्राफिक र मौखिक मार्केटिंगको शब्दलाई आधुनिक ब्रान्डमा बुझाउन।
टैग: डेभिड चाँदीसामाजिक मिडिया रणनीतिहरुसामाजिक नेटवर्क व्यापार योजनासामाजिक नेटवर्क व्यापार योजना
Google एनालिटिक्स अभियान क्वेरीस्ट्रिंग डाईनेमिकली jQuery प्रयोग गरेर थप्नुहोस्